वर्षा भन्छिन,कहिलेसम्म हामी असुरक्षित रहने ? | News Polar
वर्षा भन्छिन,कहिलेसम्म हामी असुरक्षित रहने ?
न्यूजपोलार माघ २८, २०७७, बुधबार
काठमाडौं । नेपाली नायिका वर्षा सिवाकोटीले महिलाहरु कहिलेसम्म असुरक्षित रहने भन्दै सामाजिक संजालमा प्रश्न तेर्साएकी छन् । उनले भनिन्, नारीलाई भगवान मानेर पूज्ने मेरो देशमा आज नारी स्वयं सुरक्षित छैनन्।
निर्मला र सम्झनाजस्तै भागीरथीले पनि न्याय पाउँदिनन् त ? के यति असक्षम छ हाम्रो न्यायपालिका ? के यति कम्जोर छ हाम्रो राज्य व्यवस्था, एउटा अपराधिको पहिचन गरि, सजाय दिन नसक्ने ? के गरीबका लागि न्याय त्यति महँगो भइसक्यो ? जस्ता प्रश्नहरु उनले गरेकी छन् । उनले न्यायपालिकासँग बलत्कारीहरुलाई सजायको माग गरेकी छन् ।
उनले राजनितिक दलहरुलाई व्यङ्ग्य गर्दै आग्रह गरेकी छन्, "तिम्रो र्यालीमा आएका जति मानिसले मेरा बहिनीहरुको लागि न्याय मागिदिए, फेरी अर्की बहिनी बलत्कृत हुन्न थिइन् कि ?", ' तिम्रो आन्दोलनको नारा यदी बलत्कार र बलत्कारीको विरूद्धमा लाग्ने गरेको भए, सायद मेरी बहिनिको बलत्कारीले सजाय पाउँथ्यो कि ?'
सिवाकोटीले आमसभामा भेला भएका नागरिक दाजुभाई, दिदिबहिनी, आमाबुबालाई के को लागि लड्नु पर्ने र के माग हुनु पर्ने विषयमा आफैले आफैसँग प्रश्न गर्नु पर्ने अबस्था आएको छ भनेर सचेत गराएकी छन् । यो विषयमा सबैले सोचौँ अपराधिलाई सजाय दिएर यी जस्ता अरु घटना भविष्यमा आउन नदिउ भनेर आफ्नो भावना सामाजिक संजालमा पोखेकी छन् । बलात्कार घटनाको यतिका दिन बितिसक्दा पनि अपराधिले सजाय नापाए पछि अपराधीको मनोबल झन बलियो बन्दै गएको छ र पीडित अझै पीँडामै छन् भनेर उनले आम समाजलाई सचेत गराएकी छन् । अब भने जनताको भरोसा सरकार र संविधानबाट उठ्ने बेला भइसक्यो, भन्दै उनले सरकारलाई समेत यस विषमा गम्भीर रुपमा सोच्न आग्रह गरेकी छन् ।
राजनेताहरुलाई खबरदारी गर्दै, उनले भनिन्, देश झन झन अस्थिरता तर्फ जाँदैछ त्यसैले कुर्सीको लडाइँ छोड, सत्यको लागि लड, जनाताको पक्षमा लड ,जीत तिम्रै हुनेछ । र अन्तिममा न्याय दिन अझ विलम्ब नहोस् भनेर उनले सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । उनले न्याय माग्नको लागि यस्ता ट्रयागलाइनको प्रयोग गरेकी छन् ।#justicefornirmala #justiceforsamjhana #justiceforbhagirathi #JusticeDelayedIsJusticeDenied
# भागीरथी # सरकार र संविधान # नायिका वर्षा सिवाकोटी
प्रकाशित : माघ २८, २०७७, १८:३०:२१